रवि लामिछाने सम्बन्धमा आज उच्च अदालत हेटौंडा इजलासमा सुनुवाई हुँदै, के चितवन जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टिएला ? – Etajakhabar
रवि लामिछाने सम्बन्धमा आज उच्च अदालत हेटौंडा इजलासमा सुनुवाई हुँदै, के चितवन जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टिएला ?
काठमाडौं, २६ भदौ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रक रणमा उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा विहिवार सुनुवाई हुँदैछ । सो घ टनामा चितवन जिल्ला अदालतवाट पाँच लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका रवि लामिछानेले आफु साधारण तारेखमा रिहा हुन पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका छन् । पुडाशैनी घट नामा चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको निवेदनमा माथि बिहीबार सुनुवाइ भइरहेको हो । चितवन जिल्ला अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटेका लामिछाने र पत्रकार युवराज कँडेल साधारण तारिखमा रिहा हुनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा निवेदन दिइएको छ ।
हेटौंडा अदालतले यसअघि सुनुवाइ हुँदा चितवन जिल्ला अदालतले गरेका सबै निर्णयका मिसिल र कैफियत झिकाउन आदेश दिइएको थियो । धरौटीमा रिहा भएका लामिछाने र कँडेल तथा साधारण तारेखमा रिहा भएकी रुकु भनिने अस्मिता कार्कीलाई पनि थु नामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै चितवन जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले अर्को निवेदन दिए पछि त्यसको आज वहस भइरहेको हो । उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा बिहीबार यी दुवै निवेदनमा एक साथ सुनुवाइ हुने भएको हो ।
सुनुवाइअघि दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने बताइएको छ । उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले चितवन जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध परेका निवेदनको सुनुवाइ गर्ने प्रवक्ता अमृत घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछाने, कँडेल र कार्कीलाई हिरा सतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग सहित सोमबार अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै हेटौँडा इजलासले यसअघिको आदेशअनुसार जिल्ला अदालत चितवनको फाइल आइसकेकाले बिहीबारको पेसीमा दुवै फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
Posted on: Thursday, September 12, 2019 Time: 13:09:42
-18019 second ago
-13849 second ago
-12884 second ago